Boeing dia maminavina renivola ampy ho an'ny famatsiam-bola fiaramanidina
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Boeing dia maminavina renivola ampy ho an'ny famatsiam-bola fiaramanidina
Ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola dia mahatakatra ny fahaizan'ny indostria sy ireo fotokevitra maharitra maharitra izay mahatonga ny fiaramanidina ho kilasy fananana sarobidy
Ny sehatry ny seranam-piaramanidina dia mivezivezy amin'ny areti-mifindra manerantany satria mitombo haingana ny fampiasan-doka
Ny banky ara-barotra dia nanala ny filan'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina ho an'ny liquidity tany am-piandohan'ny valanaretina
Manantena i Boeing fa ny renivohitra dia hanohy hitodika any amin'ilay sehatra amin'ny alàlan'ny mpilalao efa napetraka
Ny tetik'asa Boeing dia manohy mivezivezy any amin'ny sehatry ny famatsiam-bola fiaramanidina ny tetikasa Boeing satria ny sehatry ny seranam-piaramanidina dia mivezivezy amin'ny areti-mandringana manerantany ary mitombo hatrany ny fanaparitahana vaksin.
"Ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola dia mahatakatra ny fahaizan'ny indostria sy ireo fotokevitra maharitra maharitra izay manao ny fiaramanidina ho kilasy fananana sarobidy," hoy i Tim Myers, filohan'ny Boeing Capital Corporation. "Na eo aza ny fiatraikany COVID-19 tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny indostria aerospace manerantany, dia misy hatrany ny vola mitentina an-tsena ho an'ny mpanjifantsika, ary antenainay fa hihatsara kokoa izany rehefa manomboka mihombo ny dia."
Ny 2021 Current Aircraft Finance Market Outlook (CAFMO), navoaka voalohany nanomboka tamin'ny taona 2019, dia taratry ny fomba fijerin'i Boeing akaiky ny dinamika eo amin'ny tsena ary manombatombana ny loharanom-bola ho an'ny fanaterana fiaramanidina vaovao. Noho ny fiantraikan'ny areti-mandringana ankehitriny, ny CAFMO 2021 dia manilika ny vinavinany indostrialy maharitra iray sy dimy taona.
"Ny fototr'ireo indostrialy dia mitohy mampiseho fahasamihafana isan-karazany amin'ny tsena isan-karazany arakaraka ny fironana isam-paritany amin'ny areti-mandringana manerantany," hoy i Myers. "Manantena izahay fa ny renivohitra dia hanohy hitodika any amin'ilay sehatra amin'ny alàlan'ny mpilalao efa napetraka ary rehefa miditra am-pitadiavana fotoana vaovao ny mpandray anjara vaovao."
Ny 2021 CAFMO dia nitatitra fa ny tontolon'ny famatsiam-bola momba ny fiaramanidina dia nifarana tamin'ny 2020 tamin'ny famatsiam-bola ampy hamatsiana vola, fa amin'ny fihenjanana indrindra amin'ny trosan'ny banky sy ny fananan-ketra.